कार्तिक २२ गते शनिबार : कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल ! - jagritikhabar.com
कार्तिक २२ गते शनिबार : कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल !
आमाको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता रहनेछ। शारीरिक तथा मानिसक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ। विद्यार्थीहरूको लागि समय मध्यम भन्न सकिन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा मान-सम्मानमा आँच आउनसक्छ, सहग रहनुहोला। कार्यक्षेत्र वा व्यवसाय क्षेत्रमा स्त्री वर्गसँग सावधान रहनुहोला।
शारीरिक तथा मानिसक रूपले तपाईं स्वस्थ रहनुहुनेछ। परिवारका सदस्यसँग आनन्दमय रूपले समय बित्नेछ। साथी-भाईसँग रमणीय यात्राको योग बन्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा मान-सम्मान बढ्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समय अनुकूल रहनेछ। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्।
थोरै ढिलाइ वा अवरोध भएपनि निर्धारित समयमा काम पूरा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। आर्थिक आयोजना सफलताका साथ सम्पन्न हुनेछ। स्वादिष्ट एवम उत्तम भोजनको अवसर मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि दिन मध्यम रहनेछ। व्यापारमा अनुकूल वातावरण हुनेछ। आय बढ्नेछ।
साथी-भाई तथा आफन्तबाट उपहार प्राप्त गरेर तपाईं प्रशन्न रहनुहुनेछ। स्वादिष्ट एवम उत्तम भोजनका साथै रमणीय यात्राको आनन्द मिल्नेछ। मांगलिक कार्यमा संलग्न भइनेछ। धन लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रूपले बित्नेछ।
चरम चिन्ता र भावनाहरूको कारण शारीरिक र मानसिक अस्वस्थ महसुस हुनेछ। अनावश्यक वाद-विवादमा नपर्नुहोला। वाणीमा संयम राख्न जरूरी देखिन्छ। आय भन्दा खर्च बढी हुँदा आर्थिक समस्याले सताउन सक्छ। आफन्त तथा साथी-भाईसँग मनमुटाव हुनसक्छ।
व्यापारमा बिस्तार हुनुको साथसाथै आय पनि बढ्नेछ। कार्यक्षेत्रमा विशेष लाभ प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ। वैवाहिक जीवनमा सुख र सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ। पत्नी, छोरा र बुजुर्ग वर्गबाट ​​फाइदा मिल्नेछ। साथीहरूसँग रमाइलो यात्राको योग बन्नेछ। महिला साथीहरू विशेष लाभदायक साबित हुनेछ।
परिवारमा रउत्साह र आनन्दमय वातावरण हुनेछ। आयमा वृद्धि हुनेछ। पदोन्नतीको योग रहेको छ। आमाबाट लाभ मिल्ने सम्भावना छ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारी तपाईंसँग प्रशन्न रहनेछन्। सहकर्मीबाट भरपूर साथ सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ।
थकान र आलस्यका कारण शारीरिक स्फूर्तिको अभाव हुनेछ। रोजगार – व्यवसायमा अवरोध आउनसक्छ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारीसँग वाद-विवादमा नपर्नुहोला। सन्तानको बारेमा चिन्ता बढ्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट शुभ समाचार मिल्नेछ। वैदेशिक प्रवासको अवसर रहेको छ। ।
तपाईंले वाणी र क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, अन्यथा समस्या आइपर्न सक्छ। स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ, सजग रहनुहोला। मानसिक चिन्ताको अनुभव हुनेछ। खर्चमा वृद्धि हुनेछ। निषेधात्मक काम र अनैतिक कार्य गर्नबाट बच्नुहोला।
परिवारका सदस्य तथा साथी-भाईसँग आनन्दमय रूपले दिन बित्नेछ। शारीरिक तथा मानसिक रूपले तपाईं स्वस्थ महसुस गर्नुहुनेछ। व्यापार बढ्नेछ। आयमा वृद्धि हुनेछ। सार्वजनिक जीवनमा तपाईंको प्रतिष्ठा बढ्नेछ। विपरीत लिंगको व्यक्ति प्रति आकर्षण बढ्नेछ।
परिवारमा सद्भाव रहनेछ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको भरपूर साथ सहयोग मिल्नेछ। खर्चमा वृद्धि हुनेछ। आमाबाट लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। विरोधी वा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्। सामाजिक क्षेत्रमा मान-सम्मान बढ्नेछ।
साहित्य तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि दिन शुभ रहनेछ। प्रेमी र प्रियजनहरूको समर्थन प्राप्त हुनेछ। आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा परिस्थिति अनुकूल रहनेछ।